बैंकहरुको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा बढी हुँदा समेत कुनै कारबाही भएन् « News24 : Premium News Channel
बैंकहरुको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा बढी हुँदा समेत कुनै कारबाही भएन्
काठमाडौं । ब्याजदरमा समस्या आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजको फरक (स्प्रेड दर) दरमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । तर पाँच वटा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै तोकिए भन्दा बढी ब्याजदर फरक पारिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम सम्ममा ४ दशालव ५ प्रतिशत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको फरक (स्प्रेड दर) कायम गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । त्यस यता चैत मसान्त सम्म बैंकहरुले यस्तो दर ४ दशालव ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थामा २ वटा सरकारी बैंक र तीन वटा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले अटेर गर्दै तोकिएभन्दा बढी ब्याजदर अशुलिरहेका छन् ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर फरक तोकिए भन्दा बढी हुने बैंकहरु
स्प्रेड दरमा राष्ट्र बैंकलाई नटेरने बैंकहरु पछिल्लो समय उच्च नाफा गर्ने बैंकहरु मध्येका हुन् । हुनत केन्द्रिय बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई नटेरेर ब्याजदर फरक उच्च बनाउँदा बैंकहरुको नाफा स्वतः बढ्छ । यसरी कमाएको नाफाले बैंकको शाखःलाई गिराउँछ। तरपनि यस्ता बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अहिले सम्म कुनै कारबाही गरेको छैन् ।
निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरबीचको फरक कम हुँदा बैंकको नाफा पनि कम हुन्छ । तर जसरी पनि कमाउन पर्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका यी बैंकहरुले नाफा कमाउनकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट व्यवस्था गरेको नीति माथि नै अटेर गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छैन् । यसले आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप माथिको जोखिमलाई थप बढाउँदै गएको छ ।
सीधाकुराको ‘स्टिङ अपरेशन’ – ७८ हजार माक्ससहित सात जना समातिए, सार्वजनिक यातायातमा संक्रमणको जोखिम (भिडियो)
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत दुई देशिय सहमति
गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारमा हेल्प डेस्क
रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोकिँदा एक जनाको ज्यान गयो
कोरोना कहर : सार्वजनिक यातायातमा सजकता खै ?
नेपालमा कोरोनाको आंशका लागे यसरी हुन्छ परीक्षण !
काठमाडौं, ०२ चैत । न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ५०८ औं एपिसोड
ज्योतिकुमार पन्थी गुलरिया, चैत २ गते । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)
सबिन लामिछाने दमौली, ०२ चैत । तनहुँको आँबुखैरेनी गाँउपालिकाले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा सचेतना मुलकको लागि